Wasiir Oomaar oo diiday Wasaaradii loo Magacaabay - Awdinle Online
Wasiir Oomaar oo diiday Wasaaradii loo Magacaabay
Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo shalay laga badalay Wasaaradda duulista hawada loona badalay wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada ayaa iska diiday in uu xilkaasi qabto.
War uu soo saaray ayuu ku sheegay in uusan diyaar aheyn in uu qabto xilkaasi oo uu isaga tagay uusana aqbalin midkii loo badalay.
“Waxaa sharaf ii ah in shalay oo ay taariikhdu ahayn April 11 2021 la Ii magacaabay wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshada. Wasaaraddan oo aad muhim u ah waxay u baahan tahay Wasiir dardar geliyo howlaha baaxadda leh ee Ka socoda wasaaradda.
Muddadii aan xilka u hayay ummadda Soomaaliyeed waxaa suura gal ah in uu khalad iga dhacay, ma khaldame waa Ilaah. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay iga cafiyaan khaladaadka laga yaaba inuu iga dhaca
Previous articleDuqa Muqdisho oo digniin Amni soo saaray
Next articleDowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in Berri tahay Ramadaan